a - TECHNOMANIAC's - BLOG: February 2008
အလုပ်လုပ်နေတော့ စာရေးရတာ အင်မတန်ခက်ခဲသွားပါတယ်။ တနေ့တနေ့ ခေါင်းတစ်ကုတ်ကုတ်နှင့်ဆိုတော့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဆံပင်တွေလည်းကုန်၊ လူလည်းနုံနှင့် သတင်းလေးဖတ်ပြီးအိပ်ရတော့တာပဲ။ သတင်းဖတ်နိုင်သေးတာတောင် ဒါတော်တော်ဇွဲနှင့် လုပ်လိုက်ရတာလို့ခေါ်မယ်။ မဖတ်တော့လည်း မသိ၊ မသိတော့ သူများပြုသမျှ မခံရလေအောင် နည်းနည်းတော့ လုပ်ထားရတာပေါ့။
ကျွန်တော် မနေ့က တွေ့လိုက်တယ်။ ကနေဒါနှင့် အမေရိကားမှာ ဒဲလ်က အူဘန်းတူးတွေ နှင့်စတင်ရောင်းချတော့မယ်ဆိုပဲ။ ဘယ်လိုလာမလဲတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်တော့ဖြင့် Ubuntu မသုံးတာ ကြာလှပြီ။ တနေ့တနေ့ အဲ့ဒီ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော tools တွေ၊ T-SQL တွေ၊ C#တွေ၊ Silverlight, Atlas တွေနှင့် လုံးပါးပါးနေလိုက်တာ၊ အင်း ပိုက်ဆံလေးရတော့လည်း ခဏတော့ အောင့်အီးပြီး ရေးနေတယ်ဗျာ။ ၅လပါပဲ။ ပြီးရင်တော့ Portfolio ကောင်းကောင်းလေးရ၊ ကျောင်းပြန်တက်ပြီး တခြား ပရောဂျက်တွေပဲ ဆက်လုပ်တော့မယ်။ developing ကတော့ တစ်သက်လုံးမလုပ်ဘူးဗျာ။ ဟိုတလောက ROR ဆော့ဖ်ဝဲဟောက်စ် ၁ခုမှာ ခေါ်တာတွေ့သော်လည်း မသွားလုိုက်ရဘူး၊ Ruby နှင့် လုပ်စားရတာ အခုဟာထက်တော့ နည်းနည်း excitement ရှိဦးမယ်ထင်တယ် =P
နောက်ပြီးတော့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဗျာ။ ကလေးအနိုင်ကျင့်ပြန်ပြီ။ ယာဟူးကို တရားစွဲမလို့တဲ့။ မရရတဲ့နည်းနဲ့ ၀ယ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှလည်း ဂူဂယ်က အားရပါးရ ကြိတ်နေတာကို သူတို့မှာ ကာဖို့ ထန်းလက်၁ခုရှိတာပေါ့။ အခုတော့ Detroit က ပင်စင်စားတွေ၊ မီးသတ်သမားတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး တရားစွဲ အနိုင်ပိုင်းဖို့လုပ်ပြီ။ သြော် desperate to bid ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါတယ်။
တရားစွဲတယ်ဆိုလို့ ပန်းသီးနှင့် starbucks လည်း စွဲခံရတာတွေ့မိမှာပါ။ ဘာတဲ့ လူတွေကိုတဲ့ ပစ္စည်းဝယ်လို့ရတဲ့ Gift Card လေးတွေပေးပြီး သီချင်းတွေရောင်းလို့ဆိုပဲ။ ဒါမျိုးဆိုတာ ခုခေတ်မှာ လူတိုင်းသုံးနေတဲ့အရာပါ။ ကဒ်ကလေးယူ၊ အိမ်ပြန်သွားတော့ ခဲလေးခြစ်၊ နံပါတ်လေးကြည့် သီချင်းလေး ဒေါင်းလုပ်လုပ်၊ ဒါပဲလေ။ ဘာမှ ဆန်းတာမဟုတ်တာကို အဲ့ ကုမဏီက သူတို့ patent ပါဆိုပြီး ရစ်နေသဗျိူး။ ပိုက်ဆံများမရရတဲ့နည်းနှင့် ညှစ်ချင်ကြတာကိုး။ လူတွေက ကိုယ်တိုင်တော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှာဘဲနှင့် သူများထမင်းအိုးကို နှိုက်ချင်တယ်။
အင်း ... ကြုံရင်ကြုံသလိုရေးပါ့မယ်။
Posted by Wai Phyo at11:51 AM0comments
ကျွန်တော်တို့သည် လူမှန်းသူမှန်းသိစကတည်းက ပြိုင်ပွဲများနှင့် ရင်းနှီးလာခဲ့ကြပြီးပြီ ဟုပြောလျှင် လွန်မည်မထင်ပေ။ မိဘများက ကလေးပေါက်စ အရွယ်၌မှာပင် ပြိုင်ဆိုင်စရာ လမ်းကြောင်းတွေနှင့် ပေးတွေ့ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာ ဆိုက်ကားလုစီးသည်ကအစ၊ ဗယာကြော်လုဝယ်ခြင်း အလယ်၊ ပြန်ရောက်သည့်အခါ စာလိုက်နိုင်သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းများနှင့်အတူ သား ဂျင်ပေါက်၊ ဂေါ်လီရိုက်တာတာ ဘယ်လောက်နိုင်သလဲ စသည်ဖြင့် question marks လေး များ ဆင့်ကာခံကာ ကလေးတို့၏ စိတ်ကို ပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ် အနည်းနှင့် အများစတင် ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပေသည်။
ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းဟူသည် ကောင်းသောအနေအထား တစ်ရပ်မှ ကြည့်လျှင် လူ့ဘ၀အတွက် အင်မတန် အရေးပါသည်ကို တွေ့ရပါမည်။ ကျွန်တော် ဒီစာကို ရေးနေခြင်းမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုစိတ်ဓါတ်တွေ၊ အယူအဆတွေ ခံယူပုံ ကွဲလွဲပုံတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့လာရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခုနက ပွိုင့်ကို ပြန်ဆက်မည်ဆိုလျှင် အချို့အချို့သောသူများသည် ပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ် အားကြီးရာမှ လက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်ကုန်ပါသည်။ သူငယ်ချင်း တစ်ချို့ရှိခဲ့ပါသည်။ သူတို့၏ ပြိုင်ဆိုင်မှု စိတ်ဓါတ်တွေဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အားကုန်ထုတ်သုံးလိုက်တာက လမ်းထိပ်က ဂိမ်းဆိုင်နားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ဟိုဖက်တိုက်က မြာတစ်ပွေကို သူ့ထက်ငါ အရင် ဘူးကြပါသည်။ တစ်ချို့က အတန်းထဲက အကောင် စာမေးပွဲကျအောင် လုပ်ကြံဥာဏ်ဆည်မှုတွေ ဖန်တီးကြပါသည်။ ဂျင်ပေါက်ရာတွင်လည်း မကွဲကွဲအောင် အသေလိုက်ထုကြပါသည်။ List လုပ်ကြည့်လျှင် ဆုံးမည်မထင်ပါ။
ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဟု လူငယ်တို့၏ စိတ်ထဲတွင် မှတ်ယူလိုက်လျှင် မရရအောင် ယူလိုက်ချင်စိတ်က အရှေ့ကအရင်ပြေးပါသည်။ ဤနေရာတွင် ရလိုစိတ် မောဟက အပြည့်အ၀ဖုံးနေသဖြင့် ဘာမှမမြင်တော့ဘဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြပါတော့တယ်။ ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကို အခြေခံကျကျလေ့လာကြည့်မယ် ဆိုရင် ပထမအချက်က ကိုယ်အနိုင်ရဖို့ပါ။ ဘယ် အခြေအနေရောက်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိုင်ပြီဟု သတ်မှတ်ဖို့က မိမိတာဝန်ပါ။ ဒုတိယအချက်က Smart ကျကျ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ပါ။ ခေါင်းသုံးပြီး လုပ်ဖို့ပါ။ တတိယအချက်က အစွမ်းကုန်ရိုးသားပြီး ဘယ်တော့မှ မညစ်ပတ်ပါနှင့်။ အဓိကက ကိုယ့်ပါဝါကိုယ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ကိုယ်သာအသိဆုံးပါ။ ( ပါဝါရိမ်းဂျားအကြောင်းပြောနေသည် မထင်ပါနှင့်)။ နောက်ဆုံးအချက်က ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းပါ။
ထိုအချက်လေးချက်သည် အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်တော် အမြဲတမ်းစဉ်းစားလေ့ရှိတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပထမ အချက်ကို ကြည့်ရင် ဟ လူတိုင်း ပြောတဲ့အရာပဲဟု ထင်ပါမည်။ ဆဲတော်မမူခင် အကြောင်းစုံကို ရှင်းပါရစေ။ လူတိုင်းသည် ပြိုင်ပွဲ၁ခုကို နိုင်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရာဝယ် ရေလား၊ ဆီလား ကွဲပြားသွားမှသာ နိုင်သည်ဟု ယူဆကြပါသည်။ အမှန်တကယ်က နိုင်ခြင်းရှုံးခြင်းဟူသည် ကိုယ့်ကိုဘယ်အတိုင်းအတာထိ Impact ပေးသွားသလဲနှင့် ကြည့်သင့်ပါသည်။ သင် ဘယ်လိုမှ မနိုင်နိုင်သော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာဂုရု ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ခြင်းသည်၊ သင့်အတွက် အနိုင်ရခြင်းပါပဲ။ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ၀င်ခါနီးတိုင်းတွင် ကိုယ်နှင့်တန်ရာ တန်ရာ ဘားတစ်ခု သတ်မှတ်လိုက်သင့်ပါသည်။ ဥပမာ ဆော့ဖ်ဝဲရေး ပြိုင်ပွဲဆိုပါဆို့။ သင်က ကုဒ်ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ပမာဏကို ရေးနိုင်လျှင် သင့်အတွက်အနိုင်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါက စိတ်၏သက်သာရာရခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ လူများ ပြောတဲ့ တံတွေးခွက်ကိုလည်း မှုစရာမလိုတော့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်အဆင့်ရောက်ရင် နိုင်သလဲဆိုတာကို ခိုင်ခိုင်မာမာ သတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက် ဖလားမရလည်း စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်နေမှာပါ။ ( အဲ့ဒီဘားမမှီရင် ဘာဖြစ်လဲဆိုတာ စတုတ္ထအချက်ကို ဆက်ဖတ်ပါ။)
ဒုတိယအချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ငယ်ငယ်က မြွေကစားသလိုပါပဲ။ အဓိကက အဲ့ဒီလမ်းကို ဘယ်လိုသွားရင် ရမလဲဆိုတာကို ကြည့်ဖို့မေ့နေကြပါတယ်။ ကမူးရှုးထိုးနှင့် လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကောင် ဖိုက်ကွာဆိုတဲ့ မိုက်ရူးရဲ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေက တော့ ကြောက်ခမန်းလိလိပါ။ အဓိကက ခေါင်းနည်းနည်းသုံးပြီး ဟိုဖက်ခွကျော်၊ ဒီကောင့်ခွနင်း လုပ်လိုက်ရင် ရနေပြီး သုံးချက်လောက်ရွှေ့ရတာကို ပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ပါနှင့်။ ဂိမ်းထဲမှာကစားသလို လူဆိုးဆရာကြီးနှင့်တွေ့ရင် အားတွေ၊ Spell တွေကုန်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့မှ အပြင်လောကမှာ ခလုတ်သုံးချက်နှိပ်ပြီး ပါဝါတွေခိုးလို့မရပါဘူး။
တတိယအချက်ကို မမေ့ပါနှင့်။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပြိုင်ပါ။ လူမချပါနှင့်၊ ခြေမထိုးပါနှင့်။ ဒိုင်ကို ဘောင်းဘီဆွဲမချွတ်ပါနှင့်။ မတရားသော အခွင့်အရေးတွေကို လူလစ်တုံး လက်နှင့် ပုတ်မထည့်ပါနှင့်။ လူ့လောကအသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ အနီကတ်ပြခံရတယ်ဆိုတာ သုံးပွဲပယ်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်သက်လုံး ကွင်းပိတ်ခံရတာပါ။ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ အမြဲနှလုံးသွင်းထားသင့်တာက ငါ့ရဲ့ အစွမ်းနှင့် အသေအချာ ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အတန်းထဲတွင် စာအလွန်တော်သော လူများရှိပါသည်။ ၃နှစ်လုံးလုံး Distinction မှ မကျသော လူများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် စိတ်ပုပ်နေလျှင် အောင်မြင်မှုနှင့် ဝေးနေမှာ အသေအချာပါပဲ။ သူများစကားလည်း နားမယောင်ပါနှင့် ဒီကောင်စာမေးပွဲ ဖြေခါနီး ဆားခါးတိုက်လိုက်တာဟာ ကိုယ့်အတွက်လည်း စာတွေပိုရသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိုက်မြင့်ပြီး၊ သူ့ထက်သာအောင် မြှင့်တင်သော နည်းလမ်းကို သုံးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အနည်းဆုံး ပြိုင်ပွဲတွင်မနိုင်တောင် ကိုယ့်အတွက် ကျန်ပါသေးသည်။ အဲ့လို ယူဆကြည့်ကြပါ။ နိုင်ရင်လည်း ဘယ်လောက်အရသာ ရှိလိုက်မည်နည်း။
နောက်ဆုံး ရှုံးခြင်း၊ နိုင်ခြင်း သင့်ကိုယ်သင်သိတဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ အစောက ပြောတဲ့ ဘားတစ်ခုကို သာပြီး ကျော်ရောက်နေရင် Congratulation ပါ။ ဒါဟာ ချိုမြိန်တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ တကယ်လို့ ဘားအောက်ရောက်နေရင်တော့ ..... ဒါလည်း Congratulation ပါပဲ။ ဒီပြိုင်ပွဲကြောင့် သင်ဟာ မနေ့ကနှင့် မတူတော့တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားပြီ။ skills အသစ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေရသွားပြီ။ ရှုံးတာကို သိရတဲ့အတွက် ... အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ .. နောက်မရှုံးအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာ ... ကို သိသွားပြီ။ လူတွေက ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို အကောင်းမြင်ဝါဒီ သမားလို့၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ကျကျမြင်တာ လို့ပဲ ကျွန်တော်က ယူဆတယ်။ ၃နှစ်ကလေးလို ထိုင်ငိုနေလို့ ဘာမှအကြောင်းမထူးမှတော့ ဘာလို့ငိုနေဦးမှာလဲ။ နောက်တစ်ပွဲအတွက် ထပ်ကဲတာပေါ့။ အဲ့လေ၊ ပြင်ဆင်ရတာပေါ့။ ဘာလို့ရှုံးသွားသလဲဆိုတာကို မရှာဘဲ စိတ်ဓါတ်ထိုင်ကျနေရင် ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ကဇော်သမားတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ သူတို့အတွက် ပြိုင်ပွဲကနေ တစ်သက်လုံးအပိတ်ခံလိုက်ရတယ်။ နောက်တစ်ပွဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းဟာ မျက်ကန်းအကောင်းမြင်ဝါဒ ၁ခု မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအရာဟာ သင့်ကို တကယ့်အောင်မြင်မှုတွေဆီ သယ်သွားမဲ့ Stimuli တွေပါ။
ပြိုင်သာပြိုင်ပါ။ အားရပါးရ ခွပ်ပါ။ အဲအဲ့ ကြက်တိုက်တာ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ ဘာမှ မလုပ်တော့ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ထပ်ပြောပါရစေ။ မျှော်လင့်ခြင်း ဟာ အဓိပ္ပါယ် အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ အိပ်တစ်လုံးပါ။ အလကားရနေပြီး အချိန်မရွေးဖြည့်နိုင်တဲ့ Free Flow Drinks တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေ သောက်ပြီး မူးနေရင်လည်း ဘာမှ ဖြစ်မလာသလို၊ မသောက်ရင်လည်း ရေငတ်ပြီး ဂန့်သွားနိုင်ပါတယ်။
Posted by Wai Phyo at7:49 PM0comments
First, "Gong Xi Fa Cai" for you. It'sagreat festive season, folks. Europe is filled with Cannibal events whereas Asia, Chinese Lunar New Year.
My condolences to those who cannot go back home due to snow storms. My wishes to those who are suffering from giant devastating tornadoes in US.
#I hate disasters!
Again, whataSuper Tuesday! It was filled with moments of change and power of voices. Rhetoric speeches echoed the whole day .. well, only good things ahead.
Oh peeps, I ain't sure if you have already noticed that Adsense account can be merged with your existing Google accounts to ease your life. I didn't notice until this morning (yeah, I was in Ice Ageawhile back). Anyway, I am sick of handling multiple accounts; but now, that's gonna be easy bee bee. Just use single account to handle all your analytics, gmail, g-stuff and Adsense. Good move, isn't it? Check my screenshot below if you haven't seen any.
Yeah, again, I'm still awaiting for the result of FCC bid and Y! bid. Come on, Apple should take Y!. (Disclaimer: i have little knowledge about market but am just scared of MS monopoly on our personal data as if they have done on Business world, eek..! )
Okie, that's all for now. I'm darn occupied with applying schools, studying for exam on Sat, searching jobs and other projects. Hope I could writeasingle tech review in Burmese ... dot.
Posted by Wai Phyo at2:14 PM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ Social Networking အကြောင်းတွေ ပြောခဲ့လို့ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ရေးဖို့ ဆန္ဒပေါ်လာပါသည်။
Personal ထင်မြင်ချက်နှင့် သတိပေးချက်တစ်ခုကို ပြောပါရစေ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံး မျက်စိအနောက်ဆုံးလို့ ထင်ထားတဲ့အရာတွေထဲမှာ Social Networking Tools တွေပါတယ်ဆိုရင် ယုံပါ့မလား။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါတယ်။ အရမ်းကို clutter ဖြစ်နေပြီး အချိန်တွေကို မတရားအပိုင်သိမ်းနေတယ်လို့ ခံစားရလို့ပါ။ တော်ရုံတန်ရုံဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါတွေက မဆိုးပါ။ တနေ့တနေ့ ကိုယ့် profile ကို ဖင်တပြန်ခေါင်းတပြန် လျှောက်ပြောင်းနေမဲ့အစား တခြားဟာတွေလုပ်လိုက်ရတာက ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါသည်။ အဆိုးဆုံးက Facebook ပါပဲ။ ကျွန်တော် အမျှော်လင့်ခဲ့ဆုံး နည်းပညာဆိုက်တွေထဲမှာ FB ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဟားဒယားတိုးပွားလာတဲ့ အဲ့ဒီ Application တွေဟာ အကျိုးရှိတဲ့နေရာကနေ ဝေးရာကို ပြေးလို့နေပါပြီ။ မနက်မိုးလင်းတိုင်း အရည်မရအဖတ်မရ App အင်ဗိုက်တေးရှင်းတွေ သိပ်များနေတာ မကောင်းဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်။ လေး ငါးခုဆို လုံးဝ လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ ခဏခဏ လေးငါးဆယ်လောက် ဂိမ်းကစားဖို့၊ ဘာလုပ်ဖို့ ညာအကောင်ကိုက်ဖို့ ဖိတ်စာတွေ များနေတာကို တော့ လက်လန်ပါ၏။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာဆိုရင် Accept လုပ်ပါ့မယ်။ မကြိုက်လို့ Reject လုပ်လိုက်တာတွေကို နောက်တစ်ခါထပ်မပို့သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူတွေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ FB ရဲ့ စနစ်ကိုက အထိန်းအကွပ်မရှိ မသတ်မှတ်ပေးထားတာပါ။ အရမ်းကာရော ပွားများနေတဲ့ ဂိမ်းတွေကလည်း ကြောက်စရာပါပဲ။ မှန်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်နက်ဝက်ကင်းဆိုတာ ဒီလိုမျိုး သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီးကစားမှ၊ ဟိုကုတ်ဒီကုတ် လုပ်မှ ပျော်ဖို့ကောင်းမှာပါ။ လက်ဆောင်လေးတွေ ၀ယ်ပေးမှ စိတ်ချမ်းသာမှာပါ။ အားလုံးကို မငြင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက အတားအဆီးမရှိတော့တာကို ဆိုချင်တာပါ။ ကျွန်တော်က အမြဲတမ်း အစွန်းရောက်သဘာဝတွေကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီစကားပြောတာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ Social Networking Tools တွေကို သုံးပြီး အလုပ်လုပ် အဆင်ခြောသွားတဲ့ လူတွေ တပုံတပင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အများစုက အခုထက်ထိ FB မှာ App တွေ အင်စတောလုပ်ရ၊ အင်ဗိုက်လုပ်ရ၊ ဟိုလျှောက်ချိန်း ဒီလျှောက်ချိန်းလုပ်ရတာနှင့် တစ်ရက်ကို နာရီ ၁၅နာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းလိုက်တာကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။ ကပ်စီးနဲသင့်ဆုံး အရာများထဲတွင် အချိန်ပါပါသည်ဟု နှလုံးသွင်း ယုံကြည်ထားခြင်းသည်လည်း ကျွန်တော့်၏ ထိုထို Social Networking တွေနှင့် clash ဖြစ်မှု ဇစ်မြစ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထပ်ပြောပါရစေ။ အခုခေတ်ဟာ Social networking era ပါ။ Web 3.0 ဆိုတာကို cloud တစ်မျိုးပါလို့ ဂူဂယ် စီအီးအိုကြီးက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။ ဒီလို ချိတ်ဆက်မှုတွေကနေ အရင်းတည်မဲ့ ခေတ်တစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီ နက်ဝက်တွေကို အသုံးချပြီးလူတွေ ကူးလူးဆက်ဆံကြမဲ့ ကာလပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်၌မှာလည်း အခု ၂၀ မက ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုကာလမှာ ဒါတွေကို ခေတ်နှင့်အညီ သုံးကြတာ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရူးမူးစွာ အဲ့ဒီထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်ကြ၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နာရီပေါင်းများစွာ အကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေ ပို့နေကြပြန်ရင်တော့ သိပ်မကောင်းတော့ပါဘူး။ Facebook မှာ ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ App တွေ၊ ရှိသလို စဉ်းစားလို့မရတဲ့ လက်မခံနိုင်တဲ့ App တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်တွေပေးပါတယ်။ လိုက်ကိုက်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါပေါ့ဗျာ။ တစ်ချို့က အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါမှ မလုပ်ရရင် ညစာတောင် ပျက်သွားပါမယ်။ ဘာမှတ်လဲတဲ့။ ဖရားဖရား ကြောက်စရာကလား။ ဆိုတော့ နောက်ဆုံးအကျဉ်းချုံးပြောချင်တာက သုံးတာသုံးပါ။ အားရပါးရလေ့လာရှာဖွေသုံးပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုသုံးမှ သူများတွေနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်တွေကို တခြားအရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေမှာရော သုံးဖို့လိုနေမလား အရင်ဆန်းစစ်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ လူတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်တော့်မှာ တိုက်ရိုက်ပြောပိုင်ခွင့်0ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြင်ရတာတွေကို အသံ(အကြံ)မပြုပဲမနေနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါ။ အင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟောင်ချင်နေမိတာဗျာ။
Posted by Wai Phyo at3:16 AM0comments
Posted by Wai Phyo at4:08 PM0comments
Long day. I've just come back from outside and saw an interesting news. Nah, it's not Clinton-Obama's debate, not about Iraq's women-suicides or China's crushes into trains. It is Microsoft ! Afteralong buzzing rumor, they scooped it finally. 31$ per share of Yahoo's common stock which will accumulates up to 44.6 US$ billion. Whatamove! It'sahuge blow to GOOG. I saw in the news that YHOO executives are scratching their heads now whether to ditch the company and sleep comfortably for rest of the life with MS stocks (or cash). We'll hear the final words once those peeps have envisaged enough.
Sadly, on the other hand, Google is suffering some attacks from pundits. Its quarterly results shed few days ago and that below-per performance raised eye-bows in bay area. Well, that's pretty harsh for them anyway. Recent recessions in US would affect its major services enormously - esp. Online Ads. Some naysayers are even stating that their Web Search and Web Apps are not kicking ass enough, too. Plus, CFO Reyes also admit that their attempt to seize ads on social networking booms are not that performing good, as well. So so so.
Since Time Warner-AOL Merge, MS is waiting to swallow Yahoo. Now full flanks attack on Google, it's an interesting game ahead.
Enjoy the news wherever you are! Buddies.
Sources : CNN, CNBC, Microsoft, BBC.
Posted by Wai Phyo at11:42 PM0comments
သုံးနှစ် သုံးမိုးကြာပြီးတဲ့ သကာလ Graduate တော့ ဖြစ်သွားပါပြီ။ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တဲ့ အတွက် ရခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်ရပါသည်။ သို့သော် ဆက်လှမ်းရမည့် ဌာနေတွေကို မျှော်၍လည်း ခေါင်းစားရပေသည်။
အလုပ်ကို (ယာယီ၆လ) မ၀င်ခင် ဒီကြားကာလမှာ ကျွန်တော် အနည်းငယ် အားနေပေမဲ့ ဘလော့ခ်လည်း မရေးဖြစ်ပါ။ စာရေးရမှာ အင်မတန် ပျင်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတင်းတွေ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ဖြစ်သော်လည်း အားတက်စရာ ၁ခုမှ မတွေ့ပါ။ ဒါကြောင့် တနေ့တနေ့ (နောက်အပတ်တွင်ရှိသော) စာမေးပွဲအတွက် စာဖတ်လိုက်၊ အားကစားသွားလုပ်လိုက်၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ၊ ကမ္ဘာ့သတင်းများကို ဖတ်ရှုမှတ်သားပြီး နားနားနေနေ ထိုင်နေပါသည်။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော့် ဘလော့ခ်ကို ဆာဗာ ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေပြီး လိုအပ်သည်များကို ဟိုခြစ်ဒီခြစ်လုပ်နေခြင်းလည်း ပါပါသည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ထိုးကျနေချိန်မှာ စလုံးနှင့် အာရှ ကုမ္ဗဏီတွေကတော့ အနည်းနှင့် အများ အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ စလုံး ကုမ္ဗဏီများက အချောင်ရတုံး ကြိတ်နေကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးထက် အမေရိကန်စီးပွားရေးလို့ ဆိုလျှင် ပိုမှန်မည်ထင်ပါသည်။ Mortgage ဈေးကွက်ကနေ စပြီး လှိုက်စားလာလိုက်တာ အခုဆို တော်တော်ထိခိုက်နေပါပြီ။ Presidential Elections မှာ အမေရိကန်လူမျိုးတွေက စီးပွားရေးကို ပထမဦးစားပေးထားပြီး အီရတ်ကိစ္စကို အောက်တစ်ထစ် လျှော့ချလိုက်ပါသည်။ တရုတ်က ကြားက ဖြတ်ခုတ်ရမလားဆိုတော့လည်း သူ့တိုင်းပြည်မှာ လူသန်း၂၀၀ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်တဲ့ ကပ်ဆိုက်နေတော့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသွားပြီလားဆိုပြီးတောင် ပြောနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်စဉ်ကျင်းပနေမြဲဖြစ်တဲ့ Davos ဆွေးနွေးပွဲကြီးကိုတော့ အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပ ပြီးစီးသွားပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့  စီးပွားရေး အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံတကာက ပညာရှင်တွေဆွေးနွေးတဲ့ ထိုပွဲရဲ့  နောက်ဆုံးပိတ်ပွဲလေးကို CNN ၏ Hala Gorani အင်တာဗျူးတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်၊ အမေရိကန် စီးပွားရေး ထိုးကျသွားတဲ့ အတွက် အိမ်ခြံမြေတွေ လူတွေ ဒုက္ခရောက်ကုန်ပါတယ်တဲ့။ ရေနံဈေးကွက်လည်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်ကုန်ပြီး၊ Decoupling တောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုပဲ။ Decoupling ကို သူဆိုလိုတာက ယခင် အမေရိကန်မှ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တော်တော်များများကို ကြီးစိုးထားရာမှ အခု တရုတ်၊ ဂျပန်တို့အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့။ နောက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းက Gaza တို့ ဖြစ်သွားတဲ့ ဥပမာကို ပြောကြပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအားလုံးကို ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်တဲ့။ ဒီအချိန်မှာ တရုတ်ကဆရာကြီးက၀င်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာက တော့ ခိုင်မာပါတယ်။ တကယ်လို့ Export လုပ်မရလည်း ကိစ္စမရှိဘူး၊ demographic အနေအထားကိုက ပြည်တွင်း Consumption အကြီးကြီးရှိတဲ့ အတွက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာကိုယ် ပတ်ရောင်းချနေလည်း အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပဲ။ ကောင်းလှချေလား။ ထားပါတော့ ဒီလိုဒီလိုနှင့်ပဲ ပြီးသွားပါလေသည်။
ကျွန်တော်မြင်တာတစ်ခုက ဒီလိုဟိုရမ်းဒီရမ်း ခြုံလိုက်ရိုက်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကို မရပ်မခြင်းလည်း အမေရိကန် စီးပွားရေးကတော့ တက်ဖို့မရှိပါဘူး။ Stimulus Package တွေ Tax Cut တွေ ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် အစကတည်းက မရှိသင့်ခဲ့တဲ့ ဒီအီရတ် ဘာညာ စစ်ပွဲတွေကို ပြန်ရှုတ်မသိမ်းမခြင်း တော့ ဘာမှဖြစ်ထွန်းဖို့မရှိပါဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာ ကမ္ဘာ့ရန်သူပါ။ သူတစ်ယောက်တည်းရဲ့  ရန်သူမဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုသာ လိုက်ဖြဲနေမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးမှာ ဗရုန်းသုန်းကားတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ။ အခုတောင် ပန်းသီး စတော့ခ် ၁၃၀ ပဲရှိတော့တယ်။ ၀ယ်အုထားလိုက်ရင် ကောင်းမလား ကွယ်ရို့။
နောက်သတင်းက DEMO ’08 ပါ။ PC World လိုပဲ ကုမ္ဗဏီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုရဲ့ နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့ ပွဲတစ်ခုပါပဲ။ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေ ပြကြပြီး အပြိုင်အဆိုင် ရောင်းချကြပါသည်။ အကြိုက်ဆုံးက Blist အွန်လိုင်း ဒေတာဘေ့စ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Spreadsheet ဆော့်ဖ်ဝဲတစ်ခုပါ။ တခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေက SkyFire ရဲ့ မိုဘိုင်းလ် browser ပါ။ Opera Mini နှင့် ပြိုင်မဲ့ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ PC Mobilizr ကတော့ သင့်ရဲ့ ပီစီကို Blackberry ကနေထိန်းချုပ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ နောက်တစ်ခု နည်းနည်းနာမည်ကြီးသွာတဲ့ ပစ္စည်းကတော့ Widget တွေ အွန်လိုင်း ဆောက်လို့ရတဲ့ Sprout Builder ပါပဲ။ နောက်ကလေးတွေ ကြိုက်မဲ့ဟာက LeapFrog ရဲ့ Tag Reader ဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန် ကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စာအုပ်ပေါ်မှာ ထောက်လိုက်တာနှင့် အသံထွက်ဖတ်ပြတယ် ဆိုပါတယ်။ ဘောပင် အရွယ်လေးသာရှိပြီး ၄နှစ်မှ ၈နှစ် ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အားလုံး လေ့လာကြည့်ကြပါ။
အခုတော့ ဗိုက်ဆာလို့ လစ်ရဦးမယ်ဗျာ။
Posted by Wai Phyo at2:35 PM0comments